Karen Community Association UK: May 2012
ကျောက်ကြီး IDP ဆွေးနွေးပွဲ - အပိုင်း (၁-၂) (ရုပ်သံ)
Invitation of the 3rd General Meeting of European Karen Network Sweden, 13-14 July 2012
To Karen communities in Europe,
The European Karen Network is pleased to invite you to our third general meeting, which will be held in Sweden on 13 & 14 July 2012. The purpose of this meeting is to discuss the work of European Karen Network, to strengthen Karen community in Europe, share information and work towards the goal of the network.
This is the third time, Karen communities across Europe to come together and discuss Karen related issues and move forward asaunified voice. The first and second meetings were successfully held in Sweden and Demark. This year, the EKN meeting will be hosted by the Karen Swedish Committee. During the two-days meeting, there will be reports, discussion, workshops, presentations, sports and entertainment programs.
The European Karen Network aims to raise awareness about the situation of the Karen people and Burma asawhole; pressure European governments to do more to bring about peace for the Karen and for Burma.
-To act asastrong public voice on behalf of the Karen National Union, which represents the Karen people of Burma, and isademocratic Karen organization committed to human rights and democracy in Burma, and to raise awareness about the suffering of the Karen people and the struggle forafederal Burma where all people live in peace, democracy and harmony.
-To strengthen and improve coordination of Karen communities Europe wide.
-To seek stronger action on Burma from the international communities including European governments, the European Union, the United Nations Security Council, and other governments and international institutions.
-To promote unity among Karen worldwide and foster contacts with all Karen people from Burma, including in Kawthoolei (Karen State), and other Karen people worldwide.
We would be grateful if all Karen communities in Europe could send representatives to participate in this year meeting. Please RSVP no later than 15 June 2012.
Please find enclosed document for the detail arrangement of the meeting. If you need more information, please do not hesitate to contact me.
Saw Htee Ku Buhtoo
Representative from Karen Swedish Committee
Mobile phone: +46704763981
Posted by KCA.UK at 09:550comments
အချင်းချင်း မပစ်ခတ်ကြရန်နှင့် အလံ တခုတည်း အသုံးပြုသွားရန် ကရင်လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့ သဘောတူညီမှု ရရှိ
အဲခေါင်သောင့်၊ မေလ ၂၉ရက်၊ ၂၀၁၂ခုနှစ်။
ကရင်လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့ အချင်းချင်း အပြန်အလှန် မပစ်ခတ်ကြရန်နှင့် လက်ရှိ အသုံးပြုနေကြသည့် ကရင် အမျိုးသား အလံတော်ကို တခုတည်း အားလုံး အသုံးပြုသွားရန် ယမန်နေ့က သဘောတူညီမှု တခု ရရှိလိုက်ပြီ ဖြစ်သည်ဟု သိရှိရသည်။.
ယမန်နေ့ မေလ ၂၈ရက်နေ့က ကျင်းပပြုလုပ်သည့် ကရင်လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့များ၏ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲတွင် ယခုလို သဘောတူညီချက် ရရှိလိုက်ခြင်း ဖြစ်ဖြစ်သည်ဟု တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးပွဲ စီစဉ်သူ တဦး၏ အဆိုအရ သိရသည်။
ထို့အပြင် အခြား အမျိုးသားရေးအတွက် အရေးကြီးသည့် ဆုံးဖြတ်ချက် များကိုလည်း ချမှတ်နိုင်ခဲ့ပြီး အဆိုပါ အစည်းအဝေးအပေါ် အားရ ကျေနပ်မှု ရှိသည်ဟုလည်း အမည် မဖော်လိုသည့် အဆိုပါ ပွဲ စီစဉ်သူတဦးက ဆိုသည်။
အဆိုပါ ဆွေးနွေးပွဲကို ဗုဒ္ဓဘာသာ ရဟန်းတော် ဦးဝိဇန(ရမ်ဘိုဘုန်းကြီး)၊ ခရစ်ယာန်သိက္ခာတော်ရ ဆရာ စောရောဘတ်ထွေး အပါအ၀င် အခြားကရင် ခေါင်းဆောင်တို့မှ ကမကထ ပြုလုပ်ခြင်း ဖြစ်သည်။
ဆွေးနွေးပွဲသို့ ကေအဲန်ယူ၊ ကလိုထူးဘော ကရင်အစည်းအရုံးနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေး ရယူထားသည့် ကရင်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တို့ စုံစုံညီညီ တက်ရောက်ခဲ့ကြသည်ဟု သိရှိရသည်။
အခြားအသေးစိတ် အချက်အလက်များကိုလည်း ဆက်လက်တင်ဆက်သွားပါမည်။
ထို့အပြင် မြန်မာအစိုးရဖက်ကလည်း ကျောက်ကြီးဒေသရှိ အိုးအိမ်မဲ့နေသူ အမျိုးသား ၃၃ဦးနှင့် အမျိုးသမီး ၃ဦးတို့အား နိုင်ငံသားဖြစ် ကြောင်း သက်သေခံကဒ် ထုတ်ပေးခဲ့ပြီး ထိုကဒ်ဖြင့် ပြည်တွင်းပြည်ပခရီးသွားနိုင်ကြောင်း ၀န်ကြီးဦးခင်ရီက ပြောသည်။
Posted by KCA.UK at 12:160comments
ကျောက်ကြီးသို့ နော်ဝေ ဒုနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး သွားရောက်
မေလ ၂၈ရက်၊ ၂၀၁၂ခုနှစ်။ (ကေအိုင်စီ)
အိမ်ယာမဲ့နေသူများအရေး ကူညီဆောင်ရွက်ရန် နော်ဝေနိုင်ငံ ဒုတိယနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး(Torgeir Larsen) နှင့် အဖွဲ့သည် ယနေ့ (မေ လ ၂၈ရက်နေ့)တွင် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးရှိ ကျောက်ကြီးမြို့သို့ သွားရောက်ခဲ့သည်ဟု ငြိမ်းချမ်းရေးအကျိုးဆောင်များက ပြောသည်။
“မနက်ဖြန် ၉နာရီ ရန်ကုန်က စထွက်မယ်။ လ၀က (လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန) ၀န်ကြီးဦးခင်ရီနဲ့ ကရင်အမျိုး သားအစည်းအရုံးဖက်က ဦးထူးထူးလေးတို့လည်း ပါမယ်”ဟု ငြိမ်းချမ်းရေးအကျိုးဆောင်တစ်ဦးက ယမန်နေ့က ပြောခဲ့သည်။
အဆိုပါအဖွဲ့သည် ကျောက်ကြီးဒေသရှိ ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး-KNU မှ မှတ်ပုံတင်မရှိသူများအား မှတ်ပုံတင် ထုတ်ပေးရန်နှင့် ဌာနေမဲ့ ပြည်သူများ(IDP)အတွက် ကျေးရွာတည်ဆောက်ပေးမည့် အစီအစဉ်များလည်း ပါဝင်ကြောင်း သိရသည်။
ထိုကိစ္စနှင့် စပ်လျဉ်း၍ KNU အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူးချုပ် နော်စီဖိုးရာစိန်က “အထူးသဖြင့် IDP အခြေအနေတွေကို သူ(နော်ဝေ ဒုတိယ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး)က လေ့လာကြည့်မှာပါ။ ပြီးတာနဲ့ IDP အတွက် လိုအပ်တဲ့ အကူအညီတွေကို ဆက်လက် ကူညီသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။” ဟု ရှင်းလင်းပြောဆိုခဲ့သည်။
နော်ဝေအစိုးရသည် ဌာနေမဲ့ ပြည်တွင်းကရင်ဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာ ကော်မတီ (CIDKP)နှင့် ပူးတွဲ၍ ကျောက်ကြီးဒေသရှိ ပြည်တွင်းဌာနေ မဲ့ ဒုက္ခသည်များအတွက် စားနပ်ရိက္ခာ၊ အဆောက်အဦးတည်ဆောက်စရာ ပစ္စည်းနှင့် စိုက်ပျိုးရေးမျိုးစေ့ စသည်တို့ကို ကူညီပေးမည်ဖြစ် သည်ဟု နော်စီဖိုးရာစိန်က ဆက်ပြောသည်။
KNU နှင့် မြန်မာအစိုးရကြား အပစ်အခတ်ရပ်စဲပြီးနောက် နှစ်ဖက်ဆက်ဆံရေးရုံးအား ပဲခူးတိုင်း၊ ကျောက်ကြီးမြို့တွင် ဧပြီလ ၉ရက်နေ့က လည်းကောင်း၊ တနင်္သာရီတိုင်း ထားဝယ်မြို့တွင် ဧပြီလ ၁၀ရက်နေ့ကလည်းကောင်း၊ မေလ ၁၅ရက်နေ့တွင် ကရင်ပြည်နယ်၊ ဘုရားသုံး ဆူမြို့၌လည်းကောင်း ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။
၎င်းဒုတိယ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးသည် လာမည့်မေလ ၃၀ရက်နေ့တွင် ထိုင်းနိုင်ငံ၊ ချင်းမိုင်မြို့၌ လာရောက်ကာ အစိုးရမဟုတ်သည့် အဖွဲ့ အစည်းများ၊ လူထုအခြေပြု လူ့အဖွဲ့အစည်းများအပြင် နယ်စပ်အခြေစိုက် မြန်မာမီဒီယာများနှင့်လည်း တွေ့ဆုံကာ မြန်မာပြည်အတွင်း အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးနှင့် နယ်စပ်ဖြတ်ကျော်ကူညီမှုများကို ဆွေးနွေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
နော်ဝေးနိုင်ငံသည် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးကိစ္စများနှင့် ပတ်သက်၍ ငွေကြေးကူညီရန် အစိုးရနှင့် နှုတ်အားဖြင့် သဘောတူ ထားသည်ဟု သိရသည်။
Posted by KCA.UK at 10:170comments
(၂၀၁၂)ခုနှစ် ၊ ပြည်သူ့ဂုဏ်ရည် ဆုရှင် “ဆရာလဖိုင်နော်မိန်း''
Posted by KCA.UK at 10:150comments
Posted by KCA.UK at 14:250comments
Posted by KCA.UK at 20:330comments
မေ ၂၁၊ ၂၀၁၂ ပူအိုက်ခြောက်သွေ့သည့် မန္တလေးတွင် လျှပ်စစ်မီး ပုံမှန်ရရှိရေးအတွက် ဖယောင်းတိုင်များ ထွန်းညှိပြီး ဆန္ဒဖော်ထုတ်ခြင်းကို ယနေ့ ဒုတိယညအဖြစ် ဆက်လက် ပြုလုပ်ခဲ့ကြသည်။
အစိုးရသတ်မှတ်ထားသည့်အချိန်များတွင် လျှပ်စစ်ဓာတ်အား အမှန်တကယ် ဖြန့်ဖြူးပေးရေးကို လိုလားသည်ဟု ဆန္ဒပြသူများက ဆိုသည်။ (ဓာတ်ပုံများ – www.facebook.com/CJMyanmar)
ဆန္ဒပြသည့်နေရာတခုသို့ ကြွရောက်ခဲ့သည့် အရှင်ဝီရသူ
Photo-Hla Moe (Facebook)
မြို့သူမြို့သားတွေဟာ မုံရွာမြို့ရှိ စစ်ကိုင်းတိုင်း လျှပ်စစ် အင်ဂျင်နီယာရုံးရှေ့မှာ စတင် လူစုကြပြီး ဖယောင်းတိုင်မီးတွေ ကိုင်ဆောင်ကာ မြို့အတွင်း အချက်အချာကျတဲ့နေရာတွေကို
လှည့်လည်ခဲ့ကြတယ်လို့ ပါဝင်ဆန္ဒပြခဲ့တဲ့ မုံရွာမြို့သားတဦးက RFA ကို ပြောပါတယ်။
ရှမ်းပြည်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးကောင်စီနဲ့ အစိုးရ ပြည်ထောင်စုအဆင့်ဆွေးနွေးပွဲ ဒုတိယနေ့ ကျိုင်းတုံမြို့မှ တိုက်ရိုက် သတင်းပေးပို့ချက် (ရုပ်သံ)
Posted by KCA.UK at 23:070comments
ကေအဲန်ယူ တောင်ငူခရိုင်တွင် လူထုရှင်းလင်းပွဲပြုလုပ်
ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး-KNU ကိုယ်စားလှယ်များသည် ကရင်ပြည်နယ်၊ တောင်ငူခရိုင်အတွင်းရှိ ဒေသခံ ကရင်လူထုများနှင့် ပြည် တွင်း ငြိမ်းချမ်းရေး ဖော်ဆောင်မှုဖြစ်စဉ်များအား တွေ့ဆုံဆွေးနွေး ရှင်းလင်းပွဲ မေလ ၁၇ရက်နေ့က ပြုလုပ်ပြီးစီးခဲ့ရာ ''ကျနော်တို့က ဒီရှင်း လင်းပွဲကို မေလ ၁၅ရက်နေ့ကနေ ၁၇ရက်နေ့အထိ သုံးရက် ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်”ဟု KNU ဗဟိုစည်းရုံးရေးဌာန အတွင်းရေးမှူး ပဒိုစောလှ ထွန်းက ကေအိုင်စီသို့ ပြောသည်။
Posted by KCA.UK at 23:000comments
ထိုင်းနိုင်ငံ၊ မဟာချိုင်ဒေသမှာ လူမှောင်ခိုပွဲစားတွေရဲ့ ပိတ်လှောင်ခံထားရတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံသား ၁ ရာကျော်ကို မကြာသေးခင်က ထိုင်း လူမှောင်ခို ကုန်ကူးမှု တိုက်ဖျက်ရေးအဖွဲ့နဲ့ မြန်မာ ရွှေ့ပြောင်း အလုပ်သမား အရေး ဆောင်ရွက်နေတဲ့ အဖွဲ့တွေ ပူးပေါင်းပြီး ကယ်တင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ အသေးစိတ်ကို ကိုဂျေက ဆက်လက်တင်ပြပေးပါလိမ့်မယ်။
Posted by KCA.UK at 10:530comments
လယ်ယာမြေတွေ မတရား သိမ်းယူခံနေရတဲ့ လယ်သမားတွေရဲ့ဘဝ (ရုပ်သံ)
မြန်မာ့နိုင်ငံရေး တိုးတက်ဖြစ်ထွန်း ပြောင်းလဲလာပါသည်ဟု ယခုအခါ နိုင်ငံတကာ အသိုင်းအဝိုင်းနှင့် ပြည်သူများက ခံစားပျော်ရွှင်နေကြသော အချိန်အခါတွင် ယခုကဲ့သို့ မိမိပြောဆိုခြင်းနှင့် ပတ်သက်ပြီး အဆိုးမြင်ဝါဒီ တစ်ယောက်ကဲ့သို့ မြင်နိုင်ဖွယ် ရှိသည်ကို နားလည်ပါသည်။ သို့သော်လည်း မိမိတို့ စာရေးဆရာ ဟူသည်မှာ မိမိမြင်သည့် အမြင်များနှင့် သိရှိထားသည်တို့ကို စာဖတ်သူ ပရိတ်သတ်များထံသို့ တင်ပြကြရခြင်းသည် တာဝန်တရပ် ဖြစ်ပေသည်။
တပ်မတော်သား အရာရှိကြီး ကိုယ်စားလှယ်သစ်များဘာကြောင့် လွှတ်တော်ထဲ ရောက်လာကြသလဲ
Tuesday, 15 May 2012 21:00 Way Yan Aung
မကြာသေးမှီ ကာလကလေးကမှ ၂၀၀၈ ခုနှစ် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရ ရွေးချယ်ခံမလိုဘဲ လွှတ် တော်အတွင်း တက်ရောက်ခွင့် ရပြီး တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်က အမည်စာရင်းတင်သွင်းရတဲ့ တပ်မတော် အရာရှိကြီးများကို လဲလှယ်တာဝန်ပေးခန့်အပ်ခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။ အဲဒီ တပ်မတော် အရာရှိကြီးများ ဟာ ဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီး၊ ဗိုလ်မှူးကြီး၊ ဗိုလ်မှူးချုပ်စတဲ့ တပ်မတော်မှာ VIP အဆင့်လို့ သတ်မှတ်တဲ့ CO (Commanding Officer) အရာရှိကြီးများ ပိုမိုပါဝင်ကြတာကို နိုင်ငံရေးလေ့လာသူများ သတိပြုမိကြမှာပါ။ အဲဒါနဲ့ ပတ်သက်ပြီး စည်းလုံးခြင်းရဲ့အင်အားဝက်ဘ်ဆိုဒ်က နေပြည်တော်ရှိ လွှတ်တော်နဲ့ နီးစပ်သူတဦးထံ ဆက်သွယ်မေးမြန်းခဲ့ပါတယ်။ "ယခင်က ၂၅ % တပ်မတော်အရာရှိ အများစုဟာ ဗိုလ်မှူးအဆင့်များပြီး ဗိုလ်မှူးကြီးအဆင့် တဦးစ နှစ်ဦးစသာတွေ့ရပါတယ်။ ဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးဆိုရင် မရှိသလောက်ပဲဗျာ။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နဲ့ NLD အဖွဲ့ ရောက်လာဖို့ ရှိတာမို့ သူတို့နဲ့ ရင်ဆိုင်ပြောဆိုရာမှာ power တူစေဖို့ လဲလှယ်လိုက်တာဖြစ်တယ်။ နိုင်ငံတကာ မဟာဗျူဟာ၊ နိုင်ငံရေး စီးပွါးရေး စစ်ရေးတွေကို ကျွမ်းကျင်နှံ့စပ်မှုရှိအောင် လေ့လာလေ့ကျင့်သင်ကြားပေးတဲ့ နိုင်ငံတော်ကာကွယ်ရေး တက္ကသိုလ် NDC (National Defense College) နဲ့ စစ်ဦးစီးတက္ကသိုလ် ကျောင်းဆင်း ဗိုလ်မှူးကြီး၊ ဗိုလ်မှူးချုပ်တွေကို တာဝန်ပေးအပ်တာ တွေ့ရတယ်ဗျ။ အထူးသဖြင့် ဒီမိုကရေစီ အသွင်ကူးပြောင်းရာမှာ နိုင်ငံတကာ အထူးသဖြင့် အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံလို တွေ့ကြုံလာရတဲ့ အခက်အခဲတွေကို ထောက်ပြပြောဆိုနိုင်အောင် ပြင်ဆင်ဟန်တူတယ်။ ဒါ့အပြင် NLD က ဥပဒေပြင်ဖို့ကြိုးစားတာနဲ့ ဒီဥပဒေပြင်လိုက်ရင် ဘယ်လိုအကျိုးဆက်တွေ ကြုံတွေ့လာနိုင်တယ်ဆိုတာ အရပ်သား လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များနဲ့ အပြိုင်ဆွေးနွေးဖို့ ပြင်ထားတာဖြစ်နိုင်တယ်"။
ဆက်လက်ပြီး စည်းလုံးခြင်းရဲ့အင်အားဝက်ဘ်ဆိုဒ်က စစ်ရုံးရှိ တပ်မတော်အရာရှိကြီး တဦးအား သူတို့တွေနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အမြင်သဘော ထားကို မေးမြန်းခဲ့ပါတယ်။ "ဗိုလ်မှူးချုပ်၊ ဗိုလ်မှူးကြီးတွေဟာ ပြန်တမ်းဝင် အရာရှိ အမှတ် BC No (၁၆၀၀၀) မှ (၂၀၀၀၀) ကြားဆိုတော့ သူတို့နဲ့ တစ်ရပ်ကွက်ထဲအိမ်နီးနားချင်းတွေ၊ အထက်တန်းကျောင်းနေဖက်တွေ၊ တက္ကသိုလ်ကျောင်းနေဖက်တွေ၊ စစ်သင်တန်းကျောင်း အတူတူတက်ခဲ့သူတွေ၊ ဗိုလ်သင်တန်း တပတ်စဉ်ထဲတွေထဲက သူငယ်ချင်းတွေဆိုရင် စကခမှူး၊ တိုင်းမှူး၊ တပ်မမှူး တွေဖြစ်ကုန်ကြပြီဗျ။ သူတို့က (၁၉၈၀) မှ (၁၉၈၃) ထိ ဝန်းကျင်မှာ ပြန်တမ်းဝင်အရာရှိ ကျောင်းဆင်းတွေဖြစ်ပြီး ၈၈၈၈ လူထုအရေးတော်ပုံကို မှီတဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒါ့အပြင် ဗိုလ်မှူးချုပ် တောက်ထွန်းဆိုရင် တပ်မ (၄၄) တပ်မမှူး ကနေ (ယခင် တိုင်းဗဟို) လို့ခေါ်တဲ့ တပ်မတော်အဆင့်မြင့် သင်တန်းကျောင်း ကျောင်းအုပ်ကြီးအဖြစ် ပြောင်းရွှေ့ခံရသူ ဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ကိုမဆိုလိုပေမယ့် တချို့အရာရှိကြီးတွေဟာ ထိပ်ပိုင်း ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတွေက အလိုမကျ အမြင်ကပ်လို့ဖြစ်စေ၊ ဘွဲ့မရလို့ဖြစ်စေ၊ ဘွဲ့ရပေမယ့် စာပေးစာယူဖြစ် လို့နှိမ်ချင်တာရယ် အပြစ်ရယ်လို့ မယ်မယ်ရရမရှိဘဲ ထောက်ပြလို့ မရတာကြောင့် တိုင်းမှူး တပ်မမှူး မထားချင်ဘဲ ဘေးဖယ်တဲ့အနေနဲ့ ထောင့်ကပ်နေတဲ့သူတွေ ဖြစ်နေတယ်။သူတို့ကတော့ အဲဒီအပေါ်မှာ ခံစားချက်တွေ ကိုယ်စီရှိကြတယ်။ ဒီခံစားချက် တွေကို သိမြင်ရင် လွှတ်တော်တွင်းက စည်းရုံးနိုင်ဖို့ အခွင့်အလမ်းတခုလို့ မြင်တယ်။ ဒါ့အပြင် တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်အနေနဲ့ ယခင်အရာရှိငယ် (ဗိုလ်မှူး) တွေကို ဘာလို့လဲပစ်သလဲဆိုရင် ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးအမြင်ရှိနေတာတွေကို ပြောင်းလဲပစ်တာလဲ ဖြစ်နိုင်တယ်။ ဥပမာ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများ စေလွှတ်ရေးကိစ္စမှာ မမျှော်လင့်ဘဲ အတိုက်အခံများနဲ့ အတူထောက်ခံခဲ့တဲ့ ဖြစ်စဉ်တွေအရ သိပ်ပြီး စိတ်မချတော့လို့ လဲလှယ်ပစ်လိုက်တယ်လို့ မြင်တယ်ဗျာ" ဒါကြောင့် POF အနေနဲ့ တိုက်တွန်းလိုရာမှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အနေနဲ့ အရာရှိကြီးများကို နီးစပ်မှု၊ ရင်းနီးမှုနဲ့ ထိတွေ့ဆက်ဆံစည်းရုံးသင့်ပါကြောင်း။သူတို့မှ တဆင့် တပ်တွင်းမှာရှိနေတဲ့ တိုင်းမှူး၊ တပ်မမှူးအထိပေါက်ရောက်အောင် စည်းရုံးပြီး တပ်မတော်မှ နောက်ကြောင်းပြန်မလှည့်ရေးအတွက် ထိန်းထားနိုင်ပါကြောင်းအကြံပြုတင်ပြလိုက်ရပါတယ်။
Posted by KCA.UK at 00:550comments
လူတွေအနေနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေ အပေါ် သိပ်ကို အကောင်းမြင်လွန်းကြတယ်လို့ ကျမအနေနဲ့ တခါတလေ ခံစားမိပါတယ်
အင်္ဂါ, 15 မေ 2012, By ကိုသားညွန့်ဦး VOA
Posted by KCA.UK at 10:590comments
အမေရိကန်သမ္မတဟောင်း George W.Bush တည်ထောင်တဲ့ Bush Center က ကမကထလုပ် ကျင်းပတဲ့
KNLA ဒုတိယတန်း စစ်ဦးစီးမှူး ဗိုလ်မှူးကြီး စောမိုးဖြူ၏ ဈာပန အခန်းအနား။
Written by သတင်းနှင့်မီဒီယာ ကွန်ယက်။ ဇော်ကြီး။ မေလ ၁၄ ရက်၊ ၂၀၁၂ ခုနှစ်။ Tuesday, 15 May 2012 00:24
မေလ ၁၅ရက်၊ ၂၀၁၂ခုနှစ်။ ထိုင်းစံတော်ချိန် ၁၁း၂၀နာရီ (ကေအိုင်စီ)
ကရင်ပြည်နယ်၊ ဘုရားသုံးဆူမြို့တွင် ကေအဲန်ယူ ဆက်ဆံရေးရုံးကို ယနေ့မနက် ၉နာရီ(မြန်မာစံတော်ချိန်)တွင် ဖွင့်လှစ်ပြီးစီးခဲ့ရာ ဒေသခံလူထု ၂၀၀၀ကျော် တက်ရောက်ခဲ့သည်ဟု သိရသည်။
ဆက်ဆံရေးရုံးဖွင့်ပွဲကို မြန်မာအစိုးရ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးအောင်မင်းနှင့် ကေအဲန်ယူ စစ်ဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်ကြီးမူတူးစေးဖိုးတို့မှ ဖဲကြိုးဖြတ် ဖွင့်လှစ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး အခမ်းအနားကို မနက် ၁၀နာရီတွင် ရုပ်သိမ်းခဲ့ကြသည်။
၎င်းဆက်ဆံရေးရုံးဖွင့်ပွဲသို့ မြန်မာအစိုးရဘက်မှ ရထားပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီး ဦးအောင်မင်း၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန ဦးခင်ရီ အပါအ၀င် ကရင်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ် ဦးဇော်မင်းလည်း တက်ရောက်ခဲ့သည်ဟု ဖွင့်ပွဲတက်ရောက်ခဲ့သူ ကေအဲန်ယူ တပ်ဖက်အရာရှိတစ်ဦးက ပြောသည်။
ကေအဲန်ယူဘက်မှ ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေး ဖော်ဆောင်ရေးကော်မတီ ဒုဥက္ကဌ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးမူတူးစေးဖိုး၊ အတွင်းရေးမှူး ပဒိုဒေးဗစ်ထော၊ အဖွဲ့ဝင် ဗိုလ်မှူးရောဂျာခင်တို့ အပါအ၀င် တပ်မဟာ(၄)၊ (၆)၊ (၇)မှ တပ်မဟာမှူးများ ညောင်လေးပင်၊ ဘိတ်-ထားဝယ်၊ ဒူးပလာယာ၊ ဖားအံခရိုင် ဥက္ကဌများနှင့် ဗိုလ်မှူးထူးထူးလေးလည်း တက်ရောက်ခဲ့ကြသည်။
ကချင်စစ်ပြေး ရွာပုန်းရွာရှောင်နှင့် ဒုက္ခသည်စခန်းများအကြောင်း ဒေါက်တာစိုင်းထွေး၏ အစီရင်ခံတင်ပြချက် (ရုပ်သံ)
Posted by KCA.UK at 13:320comments
Posted by KCA.UK at 23:130comments
ဖနိဒါ | စနေနေ့၊ မေလ ၁၂ ရက် ၂၀၁၂ ခုနှစ် ၁၉ နာရီ ၂၁ မိနစ်
မြ၀တီမြို့နယ်အတွင်းရှိ ကလော်ဝေါ်ရွာမှ ဒေသခံတဦးက “ကျနော်တို့တွေဟာ ထိုင်းနိုင်ငံက လာတဲ့ စားသုံးကုန်၊ လူသုံးကုန် မှန်သမျှ အမှီပြုနေရတဲ့အတွက် ပြန်ဖွင့်လိုက်တော့ ကောင်းတယ်။”ဟု ပြောသည်။
Posted by KCA.UK at 12:410comments
ဗိုလ်မှူးကြီးမိုးဖြူသည် မွန်ပြည်နယ်၊ ဘီးလင်းမြို့နယ် ကြိုးဝိုင်းရွာသားဖြစ်ပြီး ၁၉၇၅ခုနှစ်၊ မတ်လ ၁ရက်တွင် ကရင့်တော် လှန်ရေးသို့ KNU သထုံခရိုင်၊ တပ်မဟာ(၁)မှ စတင် ၀င်ရောက်ခဲ့သည်။
Karen observers said some of the peace mediators are retired senior army officers turned businessmen and have close link to the government. The Karen observers pointed out that the main concerns centred around the role of the Dawei Princess Company andaRangoon based, non-profit organization known as Myanmar Egress.
Posted by KCA.UK at 16:100comments
အမေရိကန်အခြေစိုက် Inter Action အဖွဲ့ရဲ့ လူမှုထူးချွန်ဆုရ နော်ဆူဇန်နာလှလှစိုးနှင့် RFA တွေ့ဆုံမေးမြန်းခန်း
<="" frameborder="0" height="360" p="" src="http://www.youtube.com/embed/0KnDDt1gHbI" width="640">
ငါတို့ ကရင်ပြည်မှာ ရဲကိုဒီလို ပြန်ပြောလို့ကတော့
Posted by KCA.UK at 10:430comments
Written by သတင်းနှင့်မီဒီယာ ကွန်ယက်။ ဇော်ကြီး။ မေလ ၃ ရက်၊ ၂၀၁၂ ခုနှစ်။ Thursday, 03 May 2012 21:30
Posted by KCA.UK at 16:140comments
မေ ၁ ရက်နေ့ မြစ်ကြီးနား စစ်အခြေစိုက်စခန်းမှ ပန်ဝါသို့ ထွက်ခွာသော မြန်မာအစိုးရ စစ်ရဟတ်ယာဉ် ၂ စင်း။